अस्पताल पुगेकी यी युवतीको जब एक्सरे गरेर डाक्टरले छाती हेर्दा चकित परे, आखिर कसरि भयो यस्तो ? – Jagaran Nepal
अस्पताल पुगेकी यी युवतीको जब एक्सरे गरेर डाक्टरले छाती हेर्दा चकित परे, आखिर कसरि भयो यस्तो ?
काठमाडौं । अमेरिकाकी एक युवती पछिल्लो दुई महिनादेखि खोकीसँग जुधिरहेकी थिइन् । उनी डाक्टरसामु यो समस्या लिएर पुगिन् र डाक्टरले उनको उपचार सुरु गरे । उपचारका दौरान उनको मुटु गलत स्थानमा छ भन्ने पत्ता लाग्यो ।
र, क्लेयरले टिकटक भिडियोमार्फत् आफ्नो कहानी सुनाएकी छन् । सिकागोमा बस्दै आएकी १९ वर्षीया क्लेयर म्याकको जुनमा हाथ का’टि’एको थियो । र, उनी टिटनासको सुई लगाउन डाक्टरसामु गएकी थिइन् । त्यो बेलासम्म उनलाई दुई महिनादेखि खोकीले पनि सताइरहेको थियो । र, अस्पताल पुगेका बेला त्यसको पनि उपचारका लागि उनले सोधेकी थिइन् ।
सोही क्रममा उनको मुटु गलत स्थानमा रहेको पत्ता लागेको थियो । क्लेयरले भिडियोमा आफू विद्यार्थी भएको र नाइट लाइफमा पार्ट-टाइम काम गर्दै आएको बताएकी छन् । गत महिना गाइडलाइन्स अनुसार सिकागो खुल्न सुरु हुँदै गर्दा उनलाई रुघा लागेको थियो । र, औषधी खाँदा पनि ठीक भइरहेको थिएन ।
उनको छातीमा इन्फेक्सनको आशंका गरेर एक्सरे गरिएको थियो । जब एक्स-रेको रिपोर्ट आयो, डाक्टर आश्चर्यमा परेका थिए । क्लेयरले आफ्नो भिडियोमा भनेअनुसार रिपोर्ट हेरेर डाक्टरले आफूलाई गलत ठाउँमा मुटु भएको बताएका थिए ।